Global Voices teny Malagasy » Ekoadaoro: Voatsikera nandritra ny nanaovany fitsidihana an’i Eoropa ny Filoha Correa · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 13 Jolay 2018 4:04 GMT 1	 · Mpanoratra Milton Ramirez Nandika Harentsoa Tsiky Rakotoson
Sokajy: Amerika Latina, Ekoatora, Fifandraisana iraisam-pirenena, Fifindràmonina, Mediam-bahoaka, Politika
Correa tao anatin'ny diabe feno olona tao Guayquil nandritra ny 19 Janoary 2008 – Sary avy amin'i Charlie Perez , lisansa Creative Commons.
Nitatitra izahay tamin'ny herinandro lasa fa noraisina tamim-pifaliana tao Espaina ny filoha Ekoadaoreana Rafael Correa ary hita fa manana fifandraisana hafa amin'ny Mpanjakan'i Espaina, ary tsy voatery nanaraka ny dian'ny filoha Venezoelana Hugo Chávez araka ny notaterina. Na izany aza, niharan'ny tsikera marobe avy amin'ny vahoaka i Correa noho ny tsy fihetsehany miharihary tamin'ny fitakian'ny vondrom-piarahamonina mpifindra-monina sy noho ny lahateniny anti-Kolombia. Iray tamin'ireo tranga tena goavana indrindra ny voarakitra an-dahatsary taorian'ny fivoriana iray tao amin'ny Lapan'i Amerika ao Espaina teo anatrehan'ny olona 1500. Nokianin'ny mpifindra-monina Ekoadaoreana iray ampahibemaso i Correa, izay nanambara fa tsy miraharaha ny fitakian'ny vondrom-piarahamonina mpifindra monina ny filoha. Rehefa handao ny toerana ny filoha, dia niantso ilay lehilahy ary nilaza hoe, “noho ny adala tahaka anao, lasa ratsy laza ny vondrom-piarahamonina Ekoadaoreana”
Niteraka tsikera teo amin'ny fampahalalam-baovao sy ny bilaogera Ekoadaoreana, ary koa ireo mpikambana ao amin'ny Antenimieram-panorenana izany fihetsika tsy matihanina izany. Dionicio Cando [es],  mpikambana ao amin'ny Antenimieram-panorenana ao amin'ny faritany Morona Santiago manondro lahatsoratra iray nosoratan'ilay mpanao gazety malaza Ekoadaoreana Carlos Vera, izay manontany hoe iza no hanagadra an'i Correa noho ny fanevatevana mpifindra monina tahaka izany:
Mahazaka ny zava-drehetra afa-tsy ny fanalam-baraka ny ankamaroan'ny firenena. Tsy hamela velively ny reharehany ny Ekoadaoreana. Ho hitanao fa ny fihetsika tsy mendrika ataon'ny filoha no dingana voalohany mankany amin'ny didy jadona izay tsy tian'i Ekoadaoro. Fantatry ny mpanao didy jadona izany. Izany no antony nahatonga ny “adala” hanakivy azy. Hita ny toetrany.
La Alharaca [es], bilaogy avy ao Guayaquil manoratra fa niresaka momba ny fifindra-monina nandritra ny fitsidihana an'i Madrid, Bruxelles sy Frantsa i Correa ary nangataka fa tsy tokony ho melohina ny fifindra-monina. Na dia izany aza, niditra ihany koa ny lohahevitra Kolombia raha nanakiana ny fomba fijerin'i Correa anti-Kolombiana  ny mpianatra Kolombiana iray.
Namoaka lahatsary i Alex Anazco avy ao amin'ny Cambiemos Ecuador [es] ary mieritreritra fa tokony hanatsoaka lesona avy amin'i Uribe Kolombiana i Correa, fa tsy miantso ny anaran'ny hafa.
Na dia miharatsy aza ny tondro ara-toekarenan'ny firenena. Niampita ny kamory ampingonongonona i Ec. Correa, fa tsy mandrisika sy mikaroka fampiasam-bola; tsy toa ny namany Uribe, izay ankoatra ny fandraisana ny tolo-kevitra avy amin'i Bill Gates [nalaina tao amin'ny http://el-federalista.blogspot.com -Ny Federalista], dia nankany Eorôpa mba hitady fampiasam-bola bebe kokoa. Saingy tsy afaka ny hieritreritra zavatra tsara kokoa ny filohantsika zazakely sy baranahiny ankoatra ny hoe ‘Noho ny adala tahaka anao’ noho ny ahiahian'ny Ekoadaoreana any am-pitandranomasina… mahonena. Misy olona manana soso-kevitra enti-manorina ve?
Olana iray monja nampisy fiantraikany amin'ny lazan'i Correa ihany izany. Nitsambikina niala ny sambo ny Konfederasionan'ny Tompotany ao Ekoadaoro (CONAIE)  ka manohitra an'i Correa ankehitriny noho ny “fanohizana ny politika ara-tsosialy manavakavaka sy politika ara-toekarena neo-liberaly elatra havanana.” Ankoatra izany, ny solosaina finday hita teo anatrehan'i Raúl Reyes, mpitarika ady anaty akatan'ny FARC izay maty nisy namono tay amin'ny sisintany iadivana no nampiseho ny fifandraisana teo amin'i Correa sy ilay vondrona. Na dia izany aza, nilaza i Correa fa hametra-pialàna izy raha voaporofo fa nanohana ny FARC havia ny governemantany.
Jereo ny lahatsary YouTube raha hijery ny lahatsary misy ny tranga eo amin'ny filoha sy ilay mpifindra monina Ekoadaoreana.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/07/13/122731/
 Charlie Perez: http://www.flickr.com/photos/49503134555@N01/2210743851/
 Rafael Correa : https://www.globalvoicesonline.org/2008/05/14/ecuador-correa-warmly-received-in-spain/
 Dionicio Cando [es],: http://asambleaconstituyente.gov.ec/blogs/dionicio_cando/2008/05/15/otro-ataque-madiaticoque-injusto/
 fomba fijerin'i Correa anti-Kolombiana: http://laalharaca.com/2008/05/15/diatriba-anticolombiana-de-correa-en-paris/
 hametra-pialàna izy : http://www.earthtimes.org/articles/show/206138,ecuadorian-president-to-step-down-if-links-to-rebels-are.html
 lahatsary YouTube : http://www.youtube.com/watch?v=fFWTJai5J8U